ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းကိုစည်သူရဲ့ နာရေးကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဟိန်းဝေယံ….. – Cele Snap
ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းကိုစည်သူရဲ့ နာရေးကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဟိန်းဝေယံ…..
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်မင်းသားဟိန်းဝေယံကတော့ ဇာတ်ကားတွေ တော်တော်များများရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက် အချစ်တွေကိုပါ အခိုင်အမာရရှိထားကာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ..။ ဟိန်းဝေယံကတော့ လက်ရှိအခြေ အနေတွေမှာ ပြည်သူတွေမဲ့အတူ ရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်သလို လမ်းပေါ်ထွက်သူရဲ ကောင်း တွေနဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းပြည်သူတွေအတွက်လည်း လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။
လှူဒါန်းမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ ဟိန်းဝေယံ ကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ အသက်ပေး ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစည်သူရဲနာရေးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ ဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်..။ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုစည်သူရဲ့နာရေးကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီး ပရိက္ခရာပစ္စည်းတွေ အလှူငွေတွေအပြင် စားသောက်စရာတွေ ပေး အပ် လှူ ဒါန်းရင်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုလည်း အားပေးစကားလေးတွေနဲ့ ဖေးမကူညီမှုတွေပြုလုပ် ခဲ့တာပါ..။
“အသက်ဆုံးရှုံးသွားသော ပြည်သူ့ သူရဲကောင်း ကိုစည်သူ၏မိသားစုထံသို့ ပရိက္ခရာ(၈)ပါး အလှူငွေ(၅)သိန်းနှင့်စားသောက်စရာများ သွား ရောက်ကူညီလှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်.. မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ… ကိုစည်သူ ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ရှိပါစေ.. 🙏🙏🙏 အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ). .” ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖေးမခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှထားတာပါ..။အခုလိုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်ဖေးမကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ဟိန်းဝေယံကို ပရိ သတ် တွေကလည်း အားပေးစကားလေးတွေပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..
Source: Heinn Wai Yan’s Fb Acc
ပရိသတျကွီးရေ.. သရုပျဆောငျမငျးသားဟိနျးဝယေံကတော့ ဇာတျကားတှေ တျောတျောမြားမြားရိုကျကူးထားပွီး ပရိသတျတှရေဲ့တဈခဲနကျ အခဈြတှကေိုပါ အခိုငျအမာရရှိထားကာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့အနုပညာရှငျတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ..။ ဟိနျးဝယေံကတော့ လကျရှိအခွေ အနတှေမှော ပွညျသူတှမေဲ့အတူ ရပျတညျကာ လူထုလှုပျရှားမှုတှေ ပွုလုပျသလို လမျးပျေါထှကျသူရဲ ကောငျး တှနေဲ့ ကဆြုံးသှားတဲ့သူရဲကောငျးပွညျသူတှအေတှကျလညျး လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုလုပျနတော တှရေ့ပါတယျ..။
လှူဒါနျးမှုတှဆေကျတိုကျပွုလုပျနတေဲ့ ဟိနျးဝယေံ ကတော့ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ အသကျပေး ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုစညျသူရဲနာရေးကို ကိုယျတိုငျသှားရောကျကာ ဖေးမကူညီမှုတှနေဲ့ လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပွနျပါတယျ..။ ကဆြုံးသှားခဲ့တဲ့ကိုစညျသူရဲ့နာရေးကို ကိုယျတိုငျ သှားရောကျပွီး ပရိက်ခရာပစ်စညျးတှေ အလှူငှတှေအေပွငျ စားသောကျစရာတှေ ပေး အပျ လှူ ဒါနျးရငျး ကနျြရဈသူမိသားစုကိုလညျး အားပေးစကားလေးတှနေဲ့ ဖေးမကူညီမှုတှပွေုလုပျ ခဲ့တာပါ..။
“အသကျဆုံးရှုံးသှားသော ပွညျသူ့ သူရဲကောငျး ကိုစညျသူ၏မိသားစုထံသို့ ပရိက်ခရာ(၈)ပါး အလှူငှေ(၅)သိနျးနှငျ့စားသောကျစရာမြား သှား ရောကျကူညီလှူဒါနျးဖွဈပါတယျ.. မိသားစုနှငျ့ထပျတူဝမျးနညျးရပါတယျခငျဗြာ… ကိုစညျသူ ကောငျးရာဘုံဘဝရောကျရှိပါစေ.. 🙏🙏🙏 အရေးတျောပုံအောငျရမညျ ). .” ဆိုပွီး ကိုယျတိုငျသှားရောကျဖေးမခဲ့တဲ့ပုံရိပျတှကေို ဝမြှေထားတာပါ..။အခုလိုအခြိနျမှာ ပွညျသူတှနေဲ့အတူရပျတညျပွီး တတျနိုငျသလောကျဖေးမကူညီမှုတှေ ပွုလုပျနတေဲ့ဟိနျးဝယေံကို ပရိ သတျ တှကေလညျး အားပေးစကားလေးတှပွေောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..
တေိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကြာဇံကြော်ပွဲ ၁၀၀ ကိုလိုက်လံလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း…..